Kushone enye yezinkakha zabalingisi bakuleli
UCANDY Moloi owayenguVho-Makhadzi kuMuvhango udlulile emhlabeni. Isithombe:TWITTER
Charles Khuzwayo | July 28, 2020
IZOLO kulalwe ngezindaba ezibuhlungu zokudlula emhlabeni komunye wezinkakha zabalingisi bakuleli, uCandy Moloi. Abaningi bazomkhumbula uCandy elingisa indawo kaVho-Makhadzi kuMuvhango.
Izindaba zokuwa kwalomuthi omkhulu zidalulwe ngabeTV Mzansi kodwa zaqinisekiswa ngumdidiyeli omkhulu walo mdlalo, uDuma KaNdlovu ezindabeni zakwaSABC. UCandy wake wahlabana ngomklomelo weBest Supporting Actress kumaSouth African Film and Television Awards ngo2009 ngenxa yobuchule ekulingiseni indawo kaMakhadzi.
Ngaphandle koMuvhango, uCandy ubuye wadlala indawo kaFhatu Neluvhola kwiThola ngo2004, waba nguMaModumedi Death of a Queen ngo2008, walingisa indawo kaGranny Rambau kwiRing of Lies, walingisa ekaMakhadzi kwiStikvel nekaVjo-Phophi Baloyi kwiGiyani.
Ubengunina kaLerato Zah Moloi owayelingisa indawo kaRefiloe kuMuvhango. Kubantu abadlulise amazwi enduduzo kubalwa uFlorence Masebe owayenguHumbulani kuMuvhango othe "Kufa awunamahloni." Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela kungakaziwa imbangela yokushona kukaCandy.
Khonamanjalo ngeSonto kushone omunye umlingisi weSkeem Saam, uKarabo Makhobela (40) obedlala indawo kaJazzy T. Lezi zindaba zidalulwe ngabadidiyeli balo mdlalo.